၂၀၂၀ တော့ ရောက်လာပြီ။ ၂၀၁၉ အကုန်မှာစိတ်အချမ်းသာဆုံးကတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ယူနီကုဒ်စနစ်ကို ကူးပြောင်းသွားတာပဲ။ တခါတုန်းက ယူနီကုဒ်သုံးရင် ရွာပြင် ထွက်နေရတယ် ဆိုပြီး နာမည်ကြီးခဲ့ပေမယ့် ခုလို တနိုင်ငံလုံး ရွာပြင်ရောက်လာတော့ ဝမ်းသာအဲလဲ ကြိုဆိုရတာပေါ့။ ဟိဟိ။
ခုလို တနိုင်ငံလုံး ယူနီကုဒ်စနစ်ကို ပြောင်းဖို့ ဆိုပြီးတော့ စခဲ့တာတော့ ကြာပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ့် ပြောင်းရမယ့် migration plan ကိုတော့ ဓါတ်ပုံထဲက လူတွေက ဦးဆောင်ပြီးတော့ ၂၀၁၆ မှာ ရေးခဲ့ ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ (ကျွန်တော်က စာစီစာရိုက်ပဲလုပ်တာပါ😬) အဲ့တုန်းကတော့ အပြောခံရတာများပြီး ဘေးထိုင်ဘုပြောတွေများလို့ Facebook မှာကို မတင်ပဲ Instagram မှာပဲ တင်ခဲ့တာပါ။ ဓါတ်ပုံထဲက လူတွေကတော့ ဘယ်သူမှ တင်မယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် တင်တာပါ။
#milestone for Myanmar Unicode #myanmar_unicode_area
A post shared by Htet Wai Aung (@phoehtt) on Jul 31, 2016 at 9:41am PDT
ခုပြန်ကြည့်တော့ ၂၀၁၆ က ဆွဲတဲ့ plan က ၂၀၁၉ မှာ အကောင်အထည်ပေါ်တယ် ဆိုတော့ ဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူးပေါ့😬😬 (အဲ့ အရှိန်နဲ့ စလုံးကို ကျော်အောင် လုပ်မှာတဲ့နော်)
Believing that roadmap we planned. Thanks to the ones who make it. #myanmar_unicode_area
A post shared by Htet Wai Aung (@phoehtt) on Aug 1, 2016 at 8:21pm PDT
ယူနီကုဒ်ကို ရင်ထဲအသည်းထဲက လူမသိ သူမသိ တိတ်တိတ်လေး contribute လုပ်ခဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ ဆိုတာ စနစ်ကို ပြောင်းဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ငယ်လေး တခုထက် မပိုပါဘူး။
ဓါတ်ပုံထဲမှာ မပါတာက ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ကိုထွန်းထက်အောင်ရယ် စလုံးရောက်နေတဲ့ မရွန်းမီ ရယ် ၊ နယ်ပြန်သွားတဲ့ ပိုင်ခန့ရယ်။ အွန်လိုင်းကနေ ဝင် ရေး ဝင်ပြော တဲ့သူတွေတော့ ရှိတယ် မမှတ်မိတော့လို့။
အပြောခံ အဆဲခံရတဲ့ကြားက ရွာပြင်ထွက်နေကြပြီး ကိုယ့်ထမင်းကို စားပြီး ဂျီးတော်နွားကျောင်း ခဲ့ရတဲ့ ငထွားတို့အဖွဲ့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံပေါ့ဗျာ။
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာလေးတွေရဲ့ ရလာဒ်ကို မြင်ရတော့လည်း စိတ်ချမ်းသာ ပီတိတော့ ဖြစ်တာပေါ့။
စကားမစပ် ငါလေးဟာ migration နဲ့ အလွန်အကျိုးပေးနေတယ် ထင်တယ်။ ယူနီကုဒ် ပြီးတော့လည်း 2020 မှာ Low sulphur ကိုပြောင်းတဲ့ migration မှာလည်း ပါဝင်ဆင်နွဲရဦးမှာပေါ့။ ယေ့ယေ့ 🤣
Unknown November 30, 2021 at 6:58 AM